किन आज काठमाडौँ आउदैछन् भारतीय विदेशसचिव ?
भारतका विदेश सचिव हर्षवर्द्धन श्रृंगला नेपाल भ्रमणका लागि आज (बिहीबार) बिहान काठमाडौं आइपुग्दै छन्। परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतका अनुसार २ दिनका लागि नेपाल आउन लागेका उनी बिहान साढे १० बजे त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ओर्लिने छन्।
श्रृंगलाले दुई दिन काठमाडौंमा रहँदा आफ्ना समकक्षी परराष्ट्रसचिव भरतराज पौड्यालसँग द्वीपक्षीय वार्ता गर्ने छन्। नेपाल भारतबीच सीमा बिबादका कारण सम्बन्ध नै तिक्ततापूर्ण भएका बेला भारतीय विदेशसचिवको भ्रमण हुन लागेकाले यसलाई निकै चासोका साथ हेरिएको छ।
भारतले अतिक्रमण गरेको लिम्पियाधुरासहितको नेपाली क्षेत्रलाई समेत समेटेर गत नोभेम्बरमा नक्सा जारी गरेपछि नेपालले कुटनीतिक नोट पठाउँदै विरोध गरेको थियो। भारतले त्यसपछि गत बैशाखमा अतिक्रमित नेपाली भूमि कालापानी क्षेत्र हुँदै मोटरबाटो निर्माण समेत गर्‍यो।
त्यसलगत्तै नेपालले भारतद्वारा अतिक्रमित नेपाली भूमि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा सहितको भूभाग समेटिएको नक्सा सार्वजनिक गर्‍यो। त्यसको भारतले विरोध गर्‍यो। दुई देशबीच सीमा विवादले गम्भीर रुप लिएपछि नेपाले परराष्ट्र सचिवस्तरीय द्विपक्षीय संयन्त्रको बैठक राख्न निरन्तर प्रस्ताव गरेको थियो। तर भारतले कोरोना महामारीको कारण देखाएर त्यस विषयलाई पछि सार्दै आयो।
भ्रमणको क्रममा विदेश सचिव श्रृंगलाले परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलाई उनका भारतीय समकक्षी एस. जयशंकरले पठाएको भ्रमणको निम्तो हस्तान्तरण गर्ने संभावना छ। ज्ञवाली परराष्ट्रमन्त्री भएपछि भारतको औपचारिक भ्रमण गरेका छैनन्। स्रोतहरुका अनुसार मन्त्री ज्ञवालीले डिसेम्बरको मध्यतिर दिल्ली भ्रमण गर्नसक्ने संभावना रहेको छ।
बिभिन्न तहमा भएका औपचारिक तथा अनौपचारिक कुराकानीपछि दुई देशबीच कायम रहेको औपचारिक संवादहीनता लामो समयपछि तोडिँदै छ। यसअर्थमा सचिवस्तरमा हुन लागेको यो औपचारिक वार्तालाई निकै महत्वपूर्ण ठानिएको छ।